4 weeks ago अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श Leaveacomment
मैले एउटा कन्सल्टिङ कम्पनीबाट आईटीमा जब पाई एच–१बी गरेको थिएँ । ६ महिना न्यू जर्सीमा काम गरेपछि अहिले प्रोजेक्ट सिद्धिएकाले काम छैन । थोरै खानका लागि पैसा दिएर तलब २ महिनादेखि दिएको छैन । नयाँ प्रोजेक्टर पाएपछि तोकेको तलब दिन्छु भनेको छ । अर्को नयाँ काम पनि खोजिरहेको छ । अब नयाँ काम पाएँ भने मेरो एच–१बी ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन होला ? र, मैले पाउनुपर्ने तलब पाउन सक्छु कि सक्दिन होला ? उत्तरका लागि धन्यवाद ।
– जीवन, न्यूजर्सी
आई कन्सल्टिङ कम्पनीले तपाईंलाई एच–१बी भिसाका लागि युएससीआईएसमा निवेदन गर्दा लेबर कन्डिसन एप्लिकेसन (एलसीए) भन्ने फर्म डिपार्टमेन्ट अफ लेबरबाट सर्टिफाइड गरेको हुनुपर्छ । त्यस एलसीएमा इप्लोयरले कति तलब र कुन लोकेसनमा काम गर्ने भनी खुलाएको हुन्छ । एलसीएको इन्फर्मेसनको आधारमा युएससीआईएसले एच–१बी भिसा एप्रुभ गर्नेछ । एच–१बी मा इम्प्लोईलाई काममा राखेपछि इम्प्लोयरले एलसीएमा लेखेका शर्तहरु न्यूनतम रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् तोकेको ज्याला र तोकिएको लोकेसनमा काम गराउनुपर्ने हुन्छ । यदि इम्प्लोयरले एलसीएमा तोकेका शर्तहरु पूरा नगरेको खण्डमा एलसीए उल्लंघन हुन जान्छ । इम्प्लोयीको हकमा एलसीए उल्लंघन भएको खण्डमा एच–१बी इम्प्लोयीले एच–१बी भिसा गुमाउन सक्छ र इलिगल हुन सक्छ ।
तपाईंको स्थितिमा तपाईंको इम्प्लोयरबाट एलसीए उल्लंघन भएको देखिन्छ । एलसीएमा तोकेको तलब तपाईंलाई काम होस् वा नहोस् दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंलाई काम छैन भनेर बेन्च्ड गर्न मिल्दैन । काम नभएको खण्डमा एच–१बी इम्प्लोयरले त्यस्ता एच–१बी इम्प्लोईको जब टर्मिनेट गरेर वन–वे एयर टिकट उपलब्ध गराई उसको मुलुकमा फर्काई सो कुराको जानकारी युएससीआईएसलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको केसमा यो कुरा नभएको देखिएकाले तपाईंले गरे वा नगरे पनि एलसीएमा लेखिएको तलबको तपाईं हकदार हुनुहुन्छ । नपाएको तलबका लागि डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा तलब पाऊँ भनी कम्प्लेन फायल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको एच–१बी भिसा ट्रान्सफरको सम्बन्धमा एच–१बी ट्रान्सफर निवेदनमा तपाईंको भिसा मेन्टेन भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् नयाँ इम्प्लोयरले ट्रान्सफर एच–१बी भिसा पेटिसन फायल गर्दा युएससीआईएसमा सो पेटिसन दर्ता भएको दिनसम्म तपाईंको पुरानो कम्पनीमा एलसीएमा तोकेबमोजिम काम गरेको देखाउनुपर्ने हुन्छ । साधारणतया त्यसको प्रमाणका रुपमा पे–रोल रेकर्डस् वा पे–स्टाटसहरु पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तपार्ईंले भनेअनुसार यदि तपाईंको पे–रोल मेन्टेन भएको छैन भने तपाईंको एच–१बी भिसामा अवरोध भएको हुन सक्छ । अर्थात् तपाईंले एच–१बी भिसा लस गरेको हुन सक्छ । नयाँ एच–१बी पेटिसन फायल गर्दा तपाईंले एच–१बी भिसा मेन्टेन भएको देखाउन सक्नुभएन भने ट्रान्सफर एच–१बी भिसा पेटिसन एप्रुभ नहुन सक्छ । यदि तपाईं आउट अफ स्टाटस हुनुभएको छ भने त्यस दिनदेखि अन ल फुल प्रिजेन्स एक्रु गरिरहनुभएको हुन सक्छ । अहिले रिसेन्ट न्यूजअनुसार आईटी कम्पनीहरुलाई एलसीए उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही भइरहेको कुराहरु समाचारमा आएकाले तपाईंलाई पनि त्यसतिर ध्यान आकर्षित गर्न सल्लाह छ ।
Previous अमेरिकामा नेपाल आदिवासी चलचित्र महोत्सव हुने
Next संस्कार सिक्दै बालबालिका